my kitchen my life: ချစ်သူများနေ့ အမှတ်တရ ဟင်းပွဲ 2
ချစ်သူများနေ့ အမှတ်တရ ဟင်းပွဲ 2
costatina d'agnello "maria teresa" & cappesante, teale di norcia su scaglie di barbabietolaecoulis allo zafferano
best piece of lamb & sea scallops with shaving of black truffles, beetroot flakes, saffron coulis and compotte of spring vegetables on crispy Parmesan nest
INGREDIENTS : rack of lamb, sea scallops, beet roots, parmesan, broccoli, caulflour, carrot, polenta flour,green bean , saffron, cream, lamb stuck.
Prepare the parmesan basket. Let the saffron simmer in the lamb stock and reduce, then add the cream.
Poach the vegetables. Cut the beet root in to flakes.
Grill the lamb rack, the sea scallops.
rack of lamb ကို seasoning လုပ်ပြီး grill ရပါမယ်။သူ့ကို grill ရတာ ကြာတယ်။ နောက် sea scallop ကိုလည်း grill ထားရမယ်။ သူ့ကို တော့ pick up လုပ်ခါနီးမှ grill တာ ကောင်းတယ်။
saffron sauce ကိုတော့ lamb stock ထဲ မှာ saffron ထည့်၊ cream ထည့်ပြီး reduce လုပ်ရပါမယ်။
beetroot ကို ကျနော်တို့က micro oven ပေးလိုက်တာပဲ။း)
mix vegs ကိုတော့ sauté ထိုးထားရတယ်။
Parmesan basket ကလည်း လွယ်ပါတယ်။ Parmesan cheese အမှုန့်တွေကို pan အပူ ပေါ်မှာ တင် ၊ အရေ ပျော် ပြီး အချပ် ဖြစ်နေတဲ့ အခါ၊ ကို လို ချင်တဲ့ ခွက် တခုထဲ ထည့်လိုက်ရင် Parmesan basket ရပြီ။
Posted by leo mark at 10:19 PM
Honey Soenaing January 8, 2014 at 8:31 PM
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် မြန်မာလိုပဲ အကုန်ရေးဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်.. ကျွန်မတို့လို ခုမှ စမ်း ချက်ကြည့်မယ့် သူတွေကျတော့ သိပ်အဆင်မပြေဘူး ingredients တွေလည်း သိပ်နားမလည်၊ how to doလည်း သိပ် နားမလည်လို့ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.